Valkpụrụ Omume - Guangzhou Airwoods Environment Technology Co., Ltd.
Ndị ahịa / ndị mmadụ / ndị mmadụ / iguzosi ike n'ezi ihe / Na-enwe Obi Enjoytọ Ọrụ / Na-agbaso Mgbanwe, Na-aga n'ihu
Innovation / Value Sharing / Na mbụ, Ọsọ ọsọ, Ọkachamara
Plọ ọrụ uru
1. Ndị Ahịa Mbụ
Anyị nwere nnukwu ịnụ ọkụ n'obi, anyị ga-eme ike anyị niile iji nyere ndị ahịa anyị aka ịga nke ọma ma hụ na ndị ahịa anyị bụ ndị mbụ na-erite uru. Ihe ndụ anyị pụtara bụ ịnye ndị ọzọ ọrụ, ndị ahịa na ọha mmadụ.
2. Mmadu na ele ya anya
Dabere na mkpa ndị ọrụ, anyị na-emelite ngwaahịa na ọrụ anyị mgbe niile.
3. Iguzosi ike n’ezi ihe
Nguzosi ike n'ezi ihe, ịchọ eziokwu site na eziokwu, ka ndị ahịa zuru ike. Anyị na-eme ihe n'eziokwu, n'ụzọ ziri ezi, n'ụzọ kwesịrị ekwesị, n'ụzọ ziri ezi na azụmahịa azụmahịa anyị niile na nke mpụga iji nweta ma jigide ntụkwasị obi nke ndị ahịa anyị hụrụ n'anya. Anyị na-echekwa ntụkwasị obi nke ndị ahịa anyị, ndị mmadụ na ndị metụtara ya.
4. Na-enwe Obi thetọ Ọrụ Ahụ
Ọrụ bụ akụkụ nke ndụ. Ndị ọrụ Airwoods na-enwe ọ workụ na-arụ ọrụ ma na-anụ ụtọ ndụ, na -emepụta ọnọdụ ọrụ ngosi, mmeghe, na-agbanwe agbanwe na nke siri ike.
5. Na-agbaso Mgbanwe, Innovation Na-aga n'ihu
Iche echiche enweghị isi ike, mgbanwe na -emepụta ohere. Anyị na-achọ ihe ngwọta ka mma ma na-arụ ọrụ anyị nke ọma. Anyị na-eme nyocha R&D ma melite teknụzụ na ọrụ iji na-akwụ ụgwọ ndị a na-achịkwa wee si otú a na-arụzu obere akụ.
6. Uru ringkekọrịta
Gbaa uru mmezu, inweta afọ ojuju bụ naanị site na ngwaahịa nke uru bara uru. Gbaa ume ikesa ọ theụ nke ihe ịga nke ọma na nsogbu nke ọdịda iji nweta uto nkịtị.
7. Tupu mgbe ahụ, Ọsọ ọsọ, Ọkachamara ọzọ
Mee ihe mbụ ma chọta ohere ndị ọzọ;
Mee ihe ngwa ngwa ma were ohere ndị ọzọ;
Bụrụ ọkachamara karị ma nweta ọganiihu.
Ebumnuche anyị bụ ịbụ onye na - eweta ihe ngwọta maka Iwu Qualitylọ Ogo Ogo.